हिमाल खबरपत्रिका | शून्यतिर...
राजनीति हावी हुँदा र सरकारले ध्यान नदिंदा ठाडै ओरालो लागेको छ, नेपालको सामाजिक अध्ययन–अनुसन्धान।
सेडा र इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) मा काम गरिसकेका काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ आर्टस्का डीन डा. महेश बास्कोटा पछिल्लो समयमा नेपालको समाज विज्ञानमाथि तटस्थ अनुसन्धान नभएको बताउँछन्। “सरकारले चासो नदेखाउँदा नेपालमा 'रिसर्च कल्चर' विकसित हुन पाएन”, डा. बास्कोटा भन्छन्, “तैपनि केही समूह र संस्था अध्ययन–अनुसन्धानमा लागिरहेका छन्। सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागिरहेको छ।”
नेपाली समाजको अध्ययन–अनुसन्धान पश्चिमाहरूले शुरू गरेका हुन्। भारतमा ब्रिटिश शासन छँदा नेपालमा रेजिडेन्ट रहेका बेलायती विद्वान ब्रायन हज्सनले सन् १८२०–४३ ताका संकलन गरेका अभिलेखहरू अहिले पनि नेपाल चिन्ने महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन्। सन् १८९५ मा नेपाल आएका फ्रान्सेली विद्वान सिल्भाँ लेभीले १९०५ मा नेपालको इतिहास प्रकाशित गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले फ्रान्स भ्रमण गरेको ४५ वर्षपछि काठमाडौं आएका लेभीले नेपालमा वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरको शासन हेरेका थिए। हज्सनले नेपाली समाजको अध्ययनमा अर्थतन्त्र, भाषा र संस्कृतिलाई र लेभीले 'क्रिटिकल' रूपमा त्यसबेलाको नेपाली समाजलाई अध्ययन/अनुसन्धानको आधार बनाएको योजनाविद् डा. पीताम्बर शर्मा बताउँछन्। यसैगरी, राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२० मा आएका बेलायती अध्येता पर्सिभल ल्याण्डनले जनसंख्याको आधारमा नेपालको अध्ययन गरेका थिए। नेपालको जनसंख्याको विवरणसहितको उनको नेपाल सम्बन्धी पुस्तक नेपाल सन् १९२८ मा बेलायतबाट प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछिको समयमा नेपाल आएका स्वीस अध्येता टोनी हागनले यहाँको समाज, भूगोललगायत जातजातिका बारेमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानको आजपर्यन्त वैशिष्ट्य कायम छ।
छिमेकी भारतमा समाज विज्ञानको अनुसन्धान नगरी देश अघि बढ्दैन भन्ने मान्यता राखेर सन् १९६८ मा 'इण्डियन काउन्सिल अफ सोसल साइन्स रिसर्च' नामको केन्द्रीय निकाय स्थापना भएको थियो। त्यसअन्तर्गत अहिले विभिन्न राज्यमा २८ वटा अनुसन्धान केन्द्र क्रियाशील छन्। पछिल्लो समयमा डा. पीताम्बर शर्मा, डा. द्वारिका ढुंगेल र डा. बालगोपाल वैद्यको संयुक्त अध्ययनले नेपालमा पनि सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको आवश्यकता औंल्याएको छ।